Xiaomi Mi Smartband 4: Sooc, qiimayaal iyo bilaabid | Androidsis
Dhowr usbuuc kadib daadasho kala duwan, maalintii ayaa timid. Xiaomi wuxuu nooga tagay jiilka afraad ee jijimadiisa waxqabad, oo la yimaada isbeddelo badan, sidoo kale magaceeda. Jiilkan cusub waxaa loogu magac daray Xiaomi Mi Smartband 4. Jiil cusub oo ka mid ah jijimooyinka guuleysta ee astaanta Shiinaha, oo la yimaada naqshad cusbooneysiin ah, marka lagu daro qeexitaannada la hagaajiyay
Tani Xiaomi Mi Smartband 4 ayaa loo soo bandhigay sidii jijimadda ugu awoodda badan ee sumadda Shiinaha naga tagto. Qaar ka mid ah daadashada ilaa iyo haatan ku saabsan jijin ayaa ugu dambeyntii la xaqiijiyay. Naqshad cusub, qeexitaanno fiican, laakiin qiimaheeda hoos u dhigaya sidii hore.
Isbeddelka naqshadeynta ayaa ah mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee isku mid ah. Waxay dooratay shaashad ballaaran kiiskan, marka lagu daro taabashada, si wanaagsan loogu isticmaalo jijin. Intaa waxaa dheer, waa jiilkii ugu horreeyay ee sumadda ee aan ka helno shaashad midab leh. Waxyaabaha aad muhiim u ah.
1 Tilmaamaha Xiaomi Mi Smartband 4
Tilmaamaha Xiaomi Mi Smartband 4
Sidii toddobaadyo la isla dhex marayay, the Xiaomi Mi Smartband 4 wuxuu adeegsadaa guddi AMOLED ah 0,95-inji cabir ahaan Waa guddigii ugu weynaa ee loo adeegsaday jijimooyinka astaanta illaa iyo hadda. Intaa waxaa dheer, waa guddi midab leh, oo kiiskan leh xallinta 240 × 120 pixels, sida shirkaddu xaqiijisay. Waxay ka dhigeysaa adeegsiga tiknoolajiyad dhan 2.5D.
Xusuus ahaan 16 xildhibaan ayaa loo isticmaalay. Sida sanadkii hore, waxaan helnaa laba nooc oo jijin, mid NFC leh iyo mid kale oo aan hawshan lahayn. Labaduba waxay la yimaadaan Bluetooth 5.0 sida isku xirnaanta, la jaan qaada taleefannada Android ee ka socda Android 4.4 iyo taleefannada iOS ee laga helo macruufka 9. Waxay kuxirantahay nooca, waxaan leenahay cabir iyo baytar ka duwan.
Xiaomi Mi Smartband 4 oo leh NFC wuxuu leeyahay batari awooddiisu dhan tahay 125 mAh. Halka qaabka aan lahayn NFC uu kiiskeedu yahay 135 Mah. Intaa waxaa sii dheer, jijimadda leh NFC xoogaa way culus tahay, in kasta oo farqiga u dhexeeya uu yahay mid aan la iska indhatiri karin oo labaduba miisaankoodu ka hooseeyo 22 garaam oo keliya, sida ay shirkaddu ku caddeysay soo bandhigidda. Suunka jijimadu waa la dheellitiri karaa dherer ahaan, laga bilaabo 155 illaa 216 mm kiiskan.
Sida caadada u ahayd jiilalka kale, waxay leedahay shaqooyinka caadiga ah ee la socodka dhaqdhaqaaqa jirka. Laga bilaabo duubista talaabooyinka, jimicsiga, tirinta kalooriyada, cabirka garaaca wadnaha ee ku jira iyo kormeerka hurdada. Waxyaabo dhowr ah ayaa la soo saaray, sida ogeysiinta haddii garaaca wadnaha uu aad u sarreeyo. Dhinaca kale, nooca NFC ee jijimadu waxay ku habboon tahay amarrada codka, markii ugu horreysay ee noocani.
Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala way awoodi doonaan u habeyn garaafka ku yaal Xiaomi Mi Smartband 4. Waxay sidoo kale leeyihiin waxqabadka u adkaysiga quusin ilaa 5 ATM. Waxaan sidoo kale leenahay howlo ay ka mid yihiin Aqoonsiga qofka soo wacaya ama muujinta farriimaha laga helay. Waxaas oo dhan waxaa loogu talagalay in si fudud oo dhameystiran loo isticmaalo jijin.
Soo bandhigida jijimadu waxay horey uga dhacday Shiinaha, halkaas oo lagu iibin doono bisha Juun 14. Marka adeegsadayaashu waa inay sugaan waqti gaaban si ay u iibsadaan. Marka laga hadlayo Spain, Waxaa la filayaa in berri si rasmi ah loo soo bandhigi doono, oo ay weheliso cusub Xiaomi Mi 9T. Shirkadda ayaa ku dajisay shabakadaha bulshada. Markaa waxay u badan tahay in maalmo yar gudahood Xiaomi Mi Smartband 4 sidoo kale lagu iibin doono Spain.
Waqtigan xaadirka ah waxaan haynaa qiimaha jijin ee Shiinaha, halkaas oo labada nooc laga bilaabay. Ma ogin weli haddii nooca leh NFC laga soo saari doono Yurub, tan iyo sanadkii hore lama sii deyn. Berri shaki ayaan ka tagi doonaa. Qiimaha Xiaomi Mi Smartband 4 ee Shiinaha waa:
Nooca aan lahayn NFC waxaa lagu qiimeeyaa 169 yuan (21 euro in la beddelo)
Qaabka leh NFC wuxuu ku kacayaa 199 yuan (25 euro in la beddelo)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi Smartband 4 hadda waa rasmi: Ogow dhammaan faahfaahinta
Khariidadaha Google ayaa na soo ogeysiin doona haddii taksiilaha doonayo inuu leexdo